Tarika Midera fifohazana Miantso tolo-tanana
Tarika iray eo ambany fiahian’ny FJKM Fifohazana, ny Midera fifohazana. Niforona, tao Ambalavao Tsienimparihy, Fianarantsoa, izy ny taona 2015.
Mbola mijanona amin’ny fiangaliana zafindraony toy ny hatramin’izay ihany ny tarika saingy nezahany novelarina sy nomena loko vaovao tamin’ny alalan’ny feo sy fitendrena izany ankehitriny, hoy ny fanazavan’ny tomponandraikitra. Nisy ny fampiasana zavamaneno avy any Toamasina sy Antananarivo izay nanome endrika vaovao ny mozikany. Niara-niasa foana tamin’ny fiangonana ihany koa izy ireo, raha ny fanamarihany, tao anatin’ny fotoana nisiany ary nahatsapany tao anatin’izany fa manana olana eo amin’ny lafiny fitaterana sy ny resaka fanamafisam-peo hatrany ireo fiangonana mpikarakara ireo. Efa mivaha izay olana izay ho azy ireto satria misy ny ezaka fanamafisam-peo sy fiara izay ataony ankehitriny. Rakikira DVD miisa telo, mirakitra hira 12 hatreto no efa vokatra ary hira notsongaina tao anaty fihirana fifohazana avokoa ireo. Ny antony dia ity tarika ity aloha hatreto no nomen’ny fiangonana fifohazana tso-drano hanao ny hira rehetra ao anaty fihiranany. Mikasa hanao hetsika maromaro ny tarika amin’ity taona ity ka miantso ireo mpiara-miasa sy ireo olona rehetra vonona hanampy amin’izany ho fitoriana hatrany ny filazantsara, hoy hatrany ny tompon’andraikitra.